Ityhubhu yokuCoca umoya-iShanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
I-FAUCI yomoya I-Cube FAQ
Ungayisebenzisa njani imveliso?
Impendulo: Sika kwaye ususe ipakethe ejikeleze ityhubhu, kwaye ungaqala ukuyisebenzisa.
Can Ingabekwa phezu kweedesika, iitafile zenkomfa, iitafile zokufundela zamagumbi, iidesika zabafundi, okanye zihanjiswe kunye nawe ukubulala iintsholongwane zomoya kufutshane ngexesha lokwenyani;
CanIngafakwa kwiibhokisi zokudlala, kwiibhokisi zonikezelo, kwiibhokisi zokugcina, kwaye ngokubulala iintsholongwane kwizinto ezisezibhokisini;
Ungayibamba ezandleni zakho nangaliphi na ixesha ukunceda ukubulala intsholongwane okanye intsholongwane enokuthi ihlaselwe zizandla zakho.
Ingaba le mveliso ibulala njani iintsholongwane?
Impendulo: Izinto ezakhelwe ngaphakathi kwi-disinfection material, i-FAUCI AAPG Material, inokukhupha ngokukhawuleza i-gaseous germicidal in the air ekufutshane, ibulale phantse zonke iintlobo zentsholongwane okanye intsholongwane emoyeni ngexesha lokwenyani kwaye ngokukhawuleza.
I-Chlorine dioxide sisizukulwana esitsha esamkelwa kwilizwe liphela esisebenza ngokufanelekileyo kunye nesibulali-ntsholongwane esikhuselekileyo. Abantu bahlala besebenzisa i-chlorine dioxide ukulungiselela inzalo. Ukusebenza kwayo kwe-disinfection kungama-2.6-10 amaxesha aphindaphindiweyo kwizibulala-ntsholongwane njenge-75% yotywala, i-chlorine, kunye ne-asidi ye-hypochlorous. I-gaseous chloride dioxide echanekileyo inokusasazwa ngokulinganayo emoyeni kwisimo se-molekyuli ye-nano-scale, ke ine-50-100 yamaxesha aphezulu okusebenza kwe-disinfection;
Uhlobo lwe-ROS olusebenzayo lweoksijini lubhekisa kumasuntswana eoksijini asebenzayo anjengehydroxyl free radicals kunye ne peroxy free radicals, ezingqinelanayo nezinto eziphambili ezibulala iintsholongwane emzimbeni womntu, kwaye ziveliswa kukubola kunye nokwahlulwa kwamanzi. Ukusebenza kwe-disinfection ukusebenza kwala masuntswana eoksijini asebenzayo aphezulu kunalawo acocekileyo erhasi yeklorini dioxide. Nokuba ii-endospores zezona zinzima ukubulawa eMhlabeni, iROS inokuzisusa kwangoko. (I-ROS oksijini esebenzayo inemisebenzi ephezulu kunye nobomi obufutshane. Kuphela sisixa somkhondo esikhoyo kufutshane nezinto zokubulala iintsholongwane ezakhelweyo)
Ngokukodwa, ngaba le mveliso inokubulala i-COVID-19 kunye neenguqu zayo?
Nangona kunjalo, ngoFebruwari 4, 2020, iKhomishini yezeMpilo yeSizwe yase China yakhupha "Isaziso kuLuhlu oluNgxamisekileyo loLuhlu lweeNtsholongwane ezithile ngexesha loThintelo noLawulo lweNtsholongwane yeNtsholongwane kaGawulayo yaseCoronavirus". ; NgoFebruwari 19, iKhomishini yezeMpilo yeSizwe yase China yakhupha "Izikhokelo zokuSetyenziswa kweeNtsholongwane zokubulala iintsholongwane" ukuphendula ubhubhane, oludwelise izibulali-ntsholongwane ezahlukeneyo ezazisetyenziselwa ukubulala ii-COVID-19s. Kuluhlu, i-chlorine dioxide yokubulala iintsholongwane ichazwe njengefanelekileyo ukubulala iintsholongwane.
Impendulo: Okwangoku, uninzi lweemveliso ezifanayo kwintengiso zisebenzisa ixabiso eliphantsi le-sodium hypochlorite (Oko kukuthi, izinto ezingafunekiyo ze-Disinfectant 84), evelisa i-asidi ye-hypochlorous ngokuphendula ngamanzi, emva koko ivelise i-chlorine dioxide kunye nenani elincinci zerhasi eyityhefu yeklorini (Uxinzelelo lwechlorine ludinga kuphela ukufikelela kuxinzelelo lwe-0.001 mg / L ukwenza ityhefu engapheliyo, ngoko ke i-asidi ye-hypochlorous ayinakusetyenziselwa ukubulala iintsholongwane emoyeni), okanye usebenzise ngokuthe ngqo ixabiso eliphantsi elifanayo le-chlorine dioxide yokufunxa amanzi ukukhupha i-chlorine dioxide. Xa umoya ofumileyo uphezulu kakhulu, uxinizelelo lunokukhutshwa ngokukhawuleza, kunye nokuncipha kuya kugqiba ngexeshana elifutshane.
Izinto ezakhelwe ngaphakathi kwi-bactericidal materials (i-FAUCI AAPG material) kwi-FAUCI cube ye-disinfection cube yamkela itekhnoloji ye-oksijini esebenzayo kunye ne-bactericidal factor itekhnoloji yokukhupha kancinci ngokuzimeleyo eyenziwe yinkampani yethu, enokuthi ikhuphe ngokuthe ngcembe nangokukhuselekileyo kwaye isebenze ngokucocekileyo nangokufanelekileyo. iioksijini ezisebenzayo ixesha elide.
Dis Into yokubulala iintsholongwane kwityhubhu yomoya ye-FAUCI yiglucose dioxide esulungekileyo kunye ne-ROS ioksijini esebenzayo, ene-disinfection ufanisi kunye nokhuseleko; Ngelixa ezinye iimveliso zingenayo i-ROS oksijini esebenzayo, kwaye kunokubakho i-gaseous hypochlorous acid, iklorine kunye nezinye izinto eziyityhefu ezingavunyelwanga kukunxibelelana kwabantu, ezingaphelelanga nje ekusebenzeni kakuhle kwe-disinfection, kodwa zikwanomngcipheko wokhuseleko;
Ube I-cube ye-FAucI yokubulala iintsholongwane ineziphumo eziqhubekayo kwiinyanga ezi-3, ngelixa ezinye iimveliso zisesona sinye seenyanga ezi-1-2.
Ngaba le mveliso ikhuselekile ukuba ingasetyenziselwa abantu kunye nezilwanyana?
Impendulo: Inqanaba le-ROS oksijini esebenzayo eveliswe kumphezulu we-FAUCI AAPG eyakhelweyo Izinto zale mveliso ziyafana neyona nto ibaluleke kakhulu kwaye ayinakwahlulwa emzimbeni womntu obulala iintsholongwane kunye neebhaktiriya. Ikwayinto yendalo kwaye ikuluhlu lomkhondo. Inenzuzo kwaye ayinabungozi emzimbeni womntu.
Kwangelo xesha, ityhubhu yomoya yokubulala iintsholongwane ye-FAUCI (eyakhelwe ngaphakathi kwi-FAUCI AAPG) idlulise uvavanyo olufanelekileyo lwe-CMA / CNAS: ukugqitywa kovavanyo lokutyhefu lwe-inhalation kubonisiwe kungabinetyhefu; ukuvavanywa kweseli micronucleus kuko konke okungalunganga, oko kuthetha ukuba akukho kuguquka kweseli kwaye akukho tyhefu yemfuza;
Izinto ze-FAUCI AAPG kunye neemveliso ezinxulumene nale mveliso zisetyenziswe ngokubanzi e-China nakwamanye amazwe ukusukela ukuphela kwe-2019 kuthintelo kunye nolawulo lwesifo se-COVID-19, kwaye akukho mpendulo ifunyenweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Impendulo: Qaphela ukuba ungayenzi imveliso imanzi. Ngokukodwa, kubalulekile ukuthintela ukunxibelelana nempahla, ulusu, kunye nentsimbi xa uvezwa emanzini kuba amanzi aya kukhawulezisa ukubonwa kokusebenza kwempahla. Iimveliso ezintsha zinokuthengwa kwakhona ngokufanelekileyo.
“Akufanele ixutywe nezinye izinto zokubulala iintsholongwane kwialkaline okanye izinto eziphilayo;
Ngaba kusafuneka ndinxibe imaski ukuba ndibeka le tyhubhu yokubulala iintsholongwane ecaleni kwam?
Impendulo: Iyafuneka kwindawo enobungozi.